amoled burn-in fixer inovimbisa kugadzirisa kuri nyore kune yako android smartphone screen & apos; s pesky yekutsva-mumatambudziko
Kuru Nhau & Ongororo AMOLED Burn-in Fixer inovimbisa kugadzirisa kuri nyore kune yako Android smartphone screen & apos; s pesky yekutsva-mumatambudziko
Mukugadziri: Brendon Anotevera Download: Android
Chikamu: Zvishandiso Mutengo: Mahara
Ndiyo yako Android smartphone & apos; s inoshamisa AMOLED pani inotanga kutambura kubva kune iyo inotyisa kupisa-ins? Welp, & chikamu cheyakajairika chechigadzirwa & apos; s kuunganidzwa kwekusakara nekubvaruka. Izvo & apos; haina kuita zvakajairika, zvisinei, kuti uve nekutsva-mukati kuratidza pachiratidziri chako pavhiki kana zvakadaro mushure mekutenga foni - zvinova ndizvo zvakaita vamwe varidzi vekutanga veNexus 6 mauniti, zvinosuwisa, vanga vachinyunyuta kwenguva yakati .
Mufananidzo:1of3Kune mwenje pakupera kwepikisi, zvakadaro. Mikana ndeyekuti yako AMOLED chishandiso ichiri nyowani - kunze kwekunge iwe & apos; tichiri kuzunza iyo yekutanga Nexus S kana Galaxy Nexus sabhuku - uye nekudaro, kutsva-mukati hakusi kwakadzika uye kupenya kwechinhu. Nekudaro, iwe unogona kurega iro rakangwara diki app inonzi AMOLED Burn-in Fixer iedze kuzorapa dambudziko rakashata. Pfungwa dzako, zvakadaro, zvichave zvisina basa kune avo vane isiri-Android 5.0 AMOLED screen smartphone, sezvo iyo app inoda Lollipop kuti ishande. Izvo & apos; hazvisi zvekucheka kumucheto - izvo & apos; inongova iyo ABF inovimba neLollipop & apos; iyo yakavakirwa-mukati 'Invert Colors' mashandiro kumisikidza iwo mavara-asina kukodzera mapikisheni akatwasuka, neimwe nzira kudzima iyo isiriyo mavara kunze.
Kunyange isinganzwike kunge mamwe mashiripiti software inokodzera chimiro chenhema, mhinduro yacho yakashanda zvakaringana vanhu vangangosvika makumi matatu vakaipa ratings shanu-nyeredzi. Uye iyo app ndeye mahara, saka haugone & apos; kurasikirwa chero chinhu chekuyedza - kunze kwekunge uchitarisa mufananidzo wakashata wezvose zviri pachiratidziri chako kwechinguva. AMOLED Kupisa-muFixer inoda kusiiwa ichimhanya kune yakatambanudzwa, toti, maminetsi makumi matatu. Iko hakuna nguva yenguva yakapihwa - yako skrini inogona kuda nyowani mushure memaminitsi mashanu, kana mushure memaminitsi makumi matatu, kana mushure memasekondi akati wandei emaminetsi makumi matatu - kesi yega yega yakasiyana
Kana iwe & apos; usine chokwadi iwe uine dambudziko rekutsva-mukati, unogona kushandisa iyo app & apos; s bundled bvunzo kuti uone kuti yako skrini inotaridzika sei kupokana neiyo grey kumashure. Izvo zvinofanirwa kuburitsa chero chipoko, chinopisa mifananidzo yemifananidzo iwe yaunogona kunge uine yako yekuratidzira ipapo ipapo bat.
Apple & apos; s Mahara App yeVhiki hapasisina
Chinangwa cheKuburitsa toString () Maitiro muJava
Tsika Apple sikuru-kumusoro inoita kuti vashandisi ve iPhone vanonoke zvakare gore rino
iPhone 12 inotsigira nekukurumidza hotspot kugovana